Sawirro+Warbixin:Nuxurka Filimka Ø§Ù„Ø·Ø±ÙŠÙ‚ Ø¥Ù„Ù‰ Ø§Ù„ÙØ±Ø¯ÙˆØ³ The Path To Paradise. – Bogga Calamada.com
Sawirro+Warbixin:Nuxurka Filimka Ø§Ù„Ø·Ø±ÙŠÙ‚ Ø¥Ù„Ù‰ Ø§Ù„ÙØ±Ø¯ÙˆØ³ The Path To Paradise.
Wuxuu ahaa qeybtii 2aad ee silsiladda “Al-Dhariiqu Ilal-Firdows” ee lagu soo bandhigyo Shuhadadii Minnesota. Xalqadan Waxaa lagu soo bandhigayaa qisada afar ka mid ah halyeeyadaas uu Allaah ku doortay saaxaadka jihaadka ee dalkan muslimka ah ee Soomaaliya, iyagoo ka garab dagaalamaya walaalooda Xarakat AlShabaabul Mujaahidiin.
Filimkan oo ah mid Documentary ah, lana daawan karo muddo ka badan 50 daqiiqo ayaa ka saameyn badan, kana culus qeybtii ka horeysay,Waxaana ugu horeyn lagu daah furayaa isdul taag kooban oo filimka uu ku sameynayo dulmiga, cunsuriyadda iyo xad-gudubyada ka jira mareykanka ee gaal iyo muslimba uusan ka bad-baadin, kuwaas oo ay ku kacayaan cadaanka cunsuriyiinta ah iyo dowladooda saliibiyadda ah.
Filimka wuxuu si gaar ah diirada u saarayaa faquuqa iyo midab takoorka lagu hayo muwaadiinta mareykanka ee madowga ah ee mudada qarniyada ah soo jiitameysay, ilaa hadana ay weli sii wadaan dadka cadaanka ah.
Wuxuuna soo gudbinayaa muuqaallada rabshadihii ugu dambeeyey ee la xiriiray falalka cunsuriyadda ee ay ku kaceen xukuumada iyo dadkeeda cadaanka ee cunsuriyiinta ah.
Dilalka bareerka ah ee ka imaanaya Police-ka iyo kooxaha cunsuriyiinta ah, Xarigga, jirdillada iyo ihaanada oo ay sii dheertahay faqriga iyo shaqo la’aanta ay la noolyihiin dadka madowga ah ee ku nool Mareykanka, In badan oo ka mid ah dadka Cadaanka ahna umaba arkaan in ay yihiin muwaadiniin u dhashay wadanka, Waxayna u dhexeeyaan cunsuriyadda dadka caddaanka ah iyo dulmiga kaga imaanaya dowladooda.
Tani waxay burburisay rajadii mudada dheer soo jiitameysay ee ay qabeen, iyo Riyadii ay ku taamayeen dadka madowga ah, waxayna waayeen waddo ay kaga gudbaan qaab nololeedkan foosha-xun ee awoowayaashoodii ka horeeyeyna lagula soo kacay balse Filimka Alkataa’ib ayaa dadkaas madowga ah ee lagu dulminayo dhulkooda u tilmaamaya fursad kale oo ay ilowsan yihiin ama khiyaar badal ah oo ay ku liibaanayaan, ayna iloowayaan cunsuriyadda ku dhisan fuquuqa iyo midab takoorka. Kaas oo ah in ay qaataan Diinta Islaamka, kuna soo biiraan Umadda Islaamka ee uu mideeyey towxiidka, ee cadaankooda uusan ka fadli badneyn madowga, Madowga uusan ka fadli badneyn cadaanka ilaa taqwada Alle Mooyee.
Fariinta ku wajahan madowga dulman ee Mareykanka iyo Islaamnimada loogu baaqayo ka dib, Wuxuu sidoo kale filimka hadana la hadlayaa muslimiinta Mareykanka ee weli ku hoosjira dulmiga dowladdaas, wuxuuna daaha ka qaadayaa qeyb ka mid ah nolosha qaxarka iyo dhibaatada ay ku jiraan dadka Muslimiinta ee ku nool Mareykanka, kuwaas oo bartilmaameed u noqday hay’adaha jawaasiista, Police-ka, lagana dhigay kuwa lagu dabajiro oo habeen iyo maalin la muraaqabeeyo, kuwa xabsiyada la dhigay, kuwo la dilay, kuwa argagax iyo rucbi ugu nool guryahooda iyo kuwo wadanka isaga cararay.
Wuxuu filimku soo bandhigayaa qiimeyn lagu sameeyey heerka uu gaarsiisan yahay dulmiga iyo xad-gudubyada ka dhan ah Muslimiinta, gaar ahaan xariga, dabagalada, duulaanada police-ka, iyo baacsiga. Wuxuuna intaas ka dib muslimiinta ku nool Mareykanka iyagana hor dhigayaa laba khiyaar midkood si ay kaga baxaan dulliga. Waa Hijro ama Jihaad. in ay soo haajiraan oo ay yimaadaan Saaxaadka Jihaadka sida Shuhadadii Minnesota oo kale ama in ay halkaas Jihaad kaligii-duulnima ah ka fuliyaan sida Nadaal Xasan iyo walaalihiisii oo kale.
Shuhadada Minnesota ayaa ka mid ah muslimiinta iska diiday in ay ku hoos noolaadaan dulmiga iyo xad-gudubyada Mareykanka,waxayna la yimaadeen Al-Walaa Wal-Baraa dhameystiran. Waxay ka soo haajireen dhal-dhalaalkii Adduunyada, waxayna dhabarka soo aadiyeen Asxaabtooda iyo Axibadooda iyagoo aan u Aaba yeeleynin dhaliisha kuwa wax eedeeya, Wuxuuna Allaah ku sharfay in uu u kulmiyo Iimaan, Hijro, Jihaad iyo Shahaado sidan u rajeyneyno.
Halyeeyga Mahad Cali Dhoore, oo ah Muhaajir ka yimid Canada, kana mid ka ahaa sidoo kale geesiyadii fuliyey howlgalkii Maxkamadda dhaaguudka, ayaa Shuhadadii Minnesota ku tilmaamay kuwo tusaale adag u jideeyey dhamaan muslimiinta ku dhaqan wadamada reer galbeedka, ayna ka soo tageen waxwaliba si ay ugu soo degdegaan raali gelinta Alle, iyo Jihaadka wadadiisa. Wuxuu yiri “Walaalahaas wax waliba ayey Allaah dartii uga soo tageen laakin Allah ayaa iyagana markii ay yimaadeen saaxaadka Jihaadka siiyey wax ka wanaagsan wixii ay ka soo tageen, Allaah wuxuu ku sharfay in ay u dagaalamaan Shareecadiisa, wuxuu ku sharfay in ay la dagaalamaan kufaarta oo ay noqdaan kuwo ay cadawgu ka argagaxaan” ayuu yiri.
Qeybtan 2aad ee Silsiladda “Ad-Dhariiqu ILAL firdows” waxaa lagu soo gudbinayaa qisaska ama Sheekada ilaa afar ka mid ah Shuhadadii Minnesota kuwaas oo kala ah: Jamaal Shaykh Banna, oo loo yaqaano Ashraf, Zakariya Macruuf, oo loo yaqaano Abu Muslim AlMuhaajir, Cabdi Rashiid Cali Cumar oo loo yaqaano Sufyaan iyo Faarax Muxammad Baladi oo isna caan ku ahaa magaca “Asadullaah Al-Amriiki.
Qisaska ugu muhiimsan ee lagu soo bandhigayo filimka waxaa ka mid ah noloshii ay ku jireen Jihaadka ka hor, waxbarashadoodii, Socdaalkoodii Hijrada ee Soomaaliya. Macaskaraatkii ay ka soo qalin jabiyeen iyo macaariktii ay ka soo qeybgaleen ama ay ku shahiideen â€“Allaha ka wada aqbalee.
Abu Muslim Al-Mahajir iyo Ashraf, waxay shahiideen sanadkii 2009 xilligaas oo dagaaladii ugu cuslaa ay ka socdeen difaacyada magaalada Muqdisho.
Jamaal wuxuu ka tirsanaa Majmuuca dagaal ku qaaday difaacyada cadowga oo uu Amiir u ahaa Abu Muslim AlMuhajir, Markii uu dagaalka cuslaaday ayuu ku taqadumay dhanka cadowgiisa, halkaas oo ay ku haleeshay xabad rasaas oo ku sii hogaamisay wadada shahaadada sida aan u rajeyneyno, Waxaana Shahiidkiisa uu ku dhacay meel u dhexeysa difaacyada cadowga iyo mujaahidiinta taas oo keentay in loo dhawaan waayo lkn Walaalkii heysatay majmuucadii uu ku jiray oo ahaa un Abu Muslim AlMuhaajir ayaa isna wacad ku maray in uusan dib u soo jeesan doonin ilaa inta shahiidka walaalkii uu ka soo qaadayo, halkaas ayuu isagana ku shahiiday Abu Muslim xilli uu doonayey in shahiidka walaalkii uu soo qaado â€“Labadooduba Allaha ka aqbalee.
Cabdi Rashiid Cali Cumar oo loo yaqaano â€“Sufyaan- ayaa isagana ahaa halyeey geesi ah oo aan faaruqin difaacyada ribaadhka, una deg dega saaxaadka marwaliba oo uu maqlo shanqarta rasaasta.,Wuxuu sidoo kale ahaa nin sabar badan oo aad u jeclaa soo nooleynta sunada rasuulka. Hijro, Icdaad, iyo Jihaad ka dib, wuxuu sufyaan isna ku shahiiday mid ka mid ah difaacyadii muqdisho, Allaha ka aqbale.
Geesiga afaraadna wuxuu ahaa libaax ka mid ahaa Libaaxyadii Alle iyo geesi ka mid ahaa geesiyadii Jihaadka Soomaaliya kaas oo aan rajeynayo in dadka in badan ay ka dharagsan yihiin magaciisa iyo codkiisa.
Â Halkan ka dhageyso Warbixin laga diyaariyay Filimka MP3
Halkan ka Daawo Filimka oo English ah.
Waa Assadullaah Al-Amriiki oo ahaa Amiirka majmuucadii Inqimaasiyiinta ee fulisay camaliyadii lagu qaaday xerada saliibiyiinta ee Dabka, sanadkii 2011-ka, taas oo lagu dilay tobaneeyo ka tirsan ciidamada saliibiyiinta.
Assadullaah wuxuu isdaarkan ka soo muuqanayaa isagoo ka qeybgalaya dagaaladii culsaa ee difaacyadii Muqdisho kuwaas oo qiraya Libaaxnimadiisa iyo halyeeynimadii uu kula dagaalamay cadowga Alle. Sidoo kale waxaa isdaarka lagu soo bandhigayaa fariimihii dardaaranada ahaa ee uu reebay ka hor camaliyadiisa, kuwaas oo uu kula hadlayo Mareykanka iyo hogaamiyahooda.